စပိန်အသင်းအတွက် နိုင်ငံတကာပွဲအများဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ကာဆီးလက်စ်ရဲ့ ပွဲအရေအတွက်စံချိန်ကို လိုက်မီပြီဖြစ်တဲ့ ရာမို့စ် | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
ဆာဂျီယို ရာမို့စ်ဟာ ဖရိုးကျွန်းစုအသင်းကို အနိုင်ရတဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲမှာ စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် နိုင်ငံတကာပွဲပေါင်း (၁၆၇)ပွဲ ကစားပေးခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ အီကာ ကာဆီးလက်စ်ရဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းကို လိုက်မီခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့ ခံစစ်မှူးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၄)နှစ်က သူ့ရဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲဦးထွက်ကို တရုတ်အသင်းနဲ့ ခြေစမ်းပွဲမှာ ကစားခဲ့တာပါ။
"သူ့ရဲ့(ကာဆီးလက်စ်)စံချိန်တင်ပွဲအရေအတွက်ကို လိုက်မီဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။"လို့ ရာမို့စ်က ပြောပါတယ်။ "ဒါက ဆုတစ်ခုဖြစ်သလို ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့ ရလဒ်တွေပါပဲ။"
အသက် (၃၃)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရာမို့စ်ဟာ စပိန်အသင်းနဲ့အတူ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ယူရို ၂၀၀၈ နဲ့ ယူရို ၂၀၁၂ ဆုဖလားတွေကို ကိုင်မြှောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ရာမို့စ်ဟာ ဂိုသမား ကာဆီးလက်စ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်က စပိန်အသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူးကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီး သူဟာ လာမယ့်လမှာ နော်ဝေ ဒါမှမဟုတ် ဆွီဒင်နဲ့ပွဲမှာသာ ကစားခဲ့ပါက စံချိန်မှတ်တမ်းသစ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
"ငါ့သူငယ်ချင်း ဒီ ၁၆၇ ပွဲအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။"လို့ ရာမို့စ်ရဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဖော်ဟောင်း ကာဆီးလက်စ်က ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ "နောက်ထပ်လည်း အများကြီးရရှိအုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတို့ဟာ စပိန်အသင်းနဲ့အတူ ကြီးကျယ်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ တွေ့ကြုံခဲ့တယ်။"
Enhorabuena por esos 167 partidos amigo!! Espero que sean muchos más. Grandes momentos los que hemos vivido con la @SeFutbol @sergioramos pic.twitter.com/KDbulbWiNh
ရာမို့စ်ဟာ အီတလီဂိုးသမား ဘူဖွန် (၁၇၆ ပွဲ)ကို လိုက်မီဖို့ (၉)ပွဲသာလိုပြီး အီဂျစ်ကွင်းလယ်လူဟောင်း အာမန် ဟာဆန်ရဲ့ ကမ္ဘာစံချိန်မှတ်တမ်း (၁၈၄ပွဲ)နဲ့ဆိုရင်တော့ (၁၇)ပွဲအကွာမှာ ရှိနေပါတယ်။
"စံချိန်မှတ်တမ်းအချက်အလက်တွေဆိုတာ ရိုက်ချိုးဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာပါ။"လို့ ရာမို့စ်က အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ "ကျနော့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေအားလုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ထင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော် အနားယူသွားပါလိမ့်မယ်။"
"နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ပြန်လာတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။"
RamosSergio RamosIker Casillas